मदन कृष्णको छोरी सारनाले लेखिन् आफ्नो बाबाको लागि रु’वा’उने पत्र,पढिसकेपछी स्तब्ध बनायो - समृद्ध नेपाल
त्यो बिहान एक्कासि उहाँको अक्सिजन लेभल कम भएछ। सधैं चम्किलो देखिने बाको अनुहारमा आज आँखा तल झरेको देख्दा मेरो मन फुटेर दुई टुक्रा होलाजस्तो भयो।म त्यसो त कमै आत्तिने गर्छु। धेरैले संयम छु भन्छन्। तर बाको त्यस्तो हालत देख्दा म संयम रहन सकिनँ। निकै चिन्तित भएँ। निकै डराएँ।
अहिले ड्याडी ठिकै हुनुहुन्छ। मलाई केही शितल महशुस भइरहेको छ। त्यसैले केही लेख्न मन लाग्यो। मेरो बुबा मदनकृष्ण श्रेष्ठको बारेमा जसलाई मैले चिनेको छु भित्रैबाट।नभएको भए माया भन्ने कुरा पृथ्वी त रगतमा डुबिसक्थे पूरा!ड्याडीले नै लेख्नुभएका यी शब्दजस्तै साँच्चै माया नहुँदो हो त के हो यो दुईदिने जीवन?
हरेक मान्छेको जीवन कसै न कसैको मायाले भरिएको हुन्छ। मायाको परिभाषा जीवनको अनुभूतिअनुसार सबैले आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका हुन्छन्। परिवारमा बस्ने माया निसर्त हुन्छ। आमा बुबा लोग्ने स्वास्नी छोरा छोरी दाजु भाइ दिदी बहिनी यी सबैमा मायाको खानी हुन्छ।
बुबा सधैं हामीलाई भन्नुहुन्छ परिवार एउटा छुट्टै देश हो।’ मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। यो हाम्रो परिवारको सानो देशमा मेरो बुबा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो देशलाई औधी माया गर्नुहुन्छ। एउटा पनि खोट नराखी उहाँले अभिभावकको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको छ।ड्याडीले गर्दा आज हामीलाई कुनै पनि चिजको अभाव महशुस भएन।
भौतिक सुविधाहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्योभन्दा ठूलो कुरा माया र ममताको अभाव हामीलाई कहिल्यै खट्किएन।त्यसैले पनि मलाई आफू एकदमै भाग्यमानी छोरीजस्तो लाग्छ।यो कुरा म व्यक्त गरिरहन्छु, किनकि व्यक्त गर्नु, कृतज्ञ हुनु अत्यावश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ तर सफा मनले।
सुजाता कोइरालाले राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिएको भन्दै भीम रावलको कडा जबाफ !
अस्ट्रेलियामा घर बनाउन साढे ६ करोड रुपैयाँ तिरेका नेपालीको भयो यस्तो !
पारस पछि दिल निसानीसंग सोनीका रोकायाको चक्कर !
आफ्ना दुई छोरीहरूलाई मुस्कानको तस्वीर देखाउँदै गगन थापाले भने मुस्कान योद्धा हुन् प्रेरणा हुन् !
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे पशुपतिमा पूजा !
महिला चिकित्सक देखेपछि जँचाउन आएका पुरुष कुरा बङ्ग्याउन थाल्छन् : डा जेबिनाको अनुभव
७ दिनमा कोरोना च्वाटै पार्ने आयुर्वेदिक औषधि बनाएको भन्दै यी युवा औषधिसहित मिडियामा !
यी हुन् चर्चामा रहेका ५ नेपाली गायिका !